मन्त्री डा. महतको कडा कटाक्ष : ‘टेबलमा नबोल्ने, सडकमा राष्ट्रियता कुरा गर्ने ?’ « Sansar News
मन्त्री डा. महतको कडा कटाक्ष : ‘टेबलमा नबोल्ने, सडकमा राष्ट्रियता कुरा गर्ने ?’
२० मंसिर २०७३, सोमबार १३:२१
२० मङ्सिर, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विपक्षी दलले कूटनीतिकस्तरमा टेबलमा कुरा नगरी सडकमा राष्ट्रियताको कुरा चर्काएर राजनीतिक मुद्दालाई अतिरञ्जीत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री डा. महतले बदलिँदो नयाँ परिवेशमा परराष्ट्र नीति परिमार्जन गर्न विज्ञ सम्मिलित टोली बनाई पुनःविचार गर्न तयारीमा आफू रहेको जानकारी गराउनुभयो । रासस